zvinhu zvinobatsira - ALinks
Zvinyorwa pazvinhu zvinobatsira
Dai 5, 2021 Shubham Sharma UK, zvinhu zvinobatsira
Dai 4, 2021 Shubham Sharma famba, UK, zvinhu zvinobatsira
Masmart band kana isu tinogona kuti Fitness mabhendi auya nenzira yakanyanyisa kureba pamusoro pemakore. Mazhinji maitiro ekurovedza muviri anoteedzana nhasi anokwanisa kuteedzera nhanho dzakatorwa, chinhambwe chakafamba, kutsva kwekoriori, uye kunyangwe tsika dzekurara, uye hadzichakudzwe
April 26, 2021 Shubham Sharma UK, zvinhu zvinobatsira
Masainzi macalculator anoshandiswa kugadzirisa matambudziko mualgebra, sainzi, uye mainjiniya. Iyo yemasvomhu karukureta inogona kugadzirisa trigonometry, logarithm, uye zvingangodaro matambudziko mukuwedzera kune akapusa masvomhu mashandiro. Texas Instruments, Casio, uye Sharp zvakaramba zvichigadzira zvemhando yepamusoro macalculator gore rinotevera
April 22, 2021 Antika Kumari India, zvinhu zvinobatsira
Kuchinjira kune smartphone nyowani kunonakidza, asi kuchinjira kune nyowani nharembozha ecosystem zvakatonyanya. Kune vanhu vazhinji, izvo zvinotyisa chaizvo. Pane kusada kuchinja nekuti nharembozha dzave chikamu chakakosha
April 22, 2021 Maitri Jha India, zvinhu zvinobatsira
Tese takavharirwa kudzimba medu sezvo nyika ichirwisa iyo inouraya Covid-19 Kudzivirirwa idziviriro yehutano inotsvakwa nemunhu wese. Kurudziro dzakaburitswa nevakuru vehutano pasi rose dzinokurudzira vanhu kuti vadye zvine hutano. Vanhu vanodya zvakanaka-zvine mwero
Kutsvaga imwe yeakanakisa selfie matanda eiyo iPhone muIndia? Zvakanaka, haufanire kutarisa kumberi. Isu takaburitsa runyorwa rweyakanakisa selfie tsvimbo yeiyo iPhone India. Kana iwe usiri kuda kuisa njodzi
Nehuwandu hwezviitiko zvehurwere hunokonzerwa nemvura yakasviba. Zvave kusungirwa kuisa yekuchenesa mvura mudzimba dzese. Mhando dzinoverengeka dzinogadzira mvura yekuchenesa vachishandisa matekinoroji akasiyana. Kent, AO Smith, Aqua Guard, HUL, Tata Swach, uye
Akanakisa Smart ma plug muUK
April 21, 2021 Shubham Sharma UK, zvinhu zvinobatsira
Munyika yanhasi yehunyanzvi, zvese zviri kungwara mazuva ano. Kubva pakufamba kuenda kumagadget, zvinhu zvese zviri kuwedzera kuwanda nekushandisa matekinoroji azvino uno. Pano, isu tiri kutaura nezve chimwe chigadzirwa chakangwara chakakanganiswa neiyo tekinoroji iyo
Akanakisa Smart plug muIndia
April 21, 2021 Shubham Sharma India, zvinhu zvinobatsira
Yakanakisa Kumeso Chiso UK
April 21, 2021 Karuna Chandna UK, zvinhu zvinobatsira
Ganda redu rinofanirwa kutsungirira yakawanda, kunyanya muLondon. Iyo yekumeso steamer inzira yakanakisa yekubvisa ganda revhu, girisi, uye poda. Iyo inoungana mumasero nekufamba kwenguva uye inokonzeresa mavara nemisoro mitema.